News - Dababka Nidaamka Korantada ee Soolarka iyo Is-beddelka Saqafka Kala Duwan ee Qarax
Waxaa jiray dhowr dhacdo oo dab ah oo ka dhacday New South Wales usbuucii la soo dhaafay ama wixii la mid ah oo ku lug leh nidaamyada tamarta qorraxda - ugu yaraan labona waxaa loo maleynayaa inay sababeen shidmayaasha kala-goynta dusha sare.
Shalay, Dab iyo Samatabbixin New South Wales ayaa soo warisay inay ka qeyb gashay dhacdo ka dhacday guri ku yaal Woongarrah oo ku taal Bartamaha Xeebta ka dib markii qof seddex-eber ah oo soo wacaya uu sheegay qiiq ka baxaya saqafka guriga.
"Dab-damiyeyaasha Hamlyn Terrace iyo Doyalson saldhigyada dabka ayaa yimid goobta wax yar ka dib waxayna awoodeen inay si dhakhso leh u damiyaan dabka oo ay u hubiyaan inuusan sii faafin," ayuu yiri Fire and Rescue. "Qeybta baaritaanka dabka iyo cilmi baarista ee FRNSW ayaa hada ku howlan sidii loo xaqiijin lahaa sababta dhalisay dabka, kaas oo la rumeysan yahay inuu ka bilaawday go'doonka go'doonka."
Bishii Diseembar 30, dab-demiyeyaasha iyo bilayska ayaa looga yeeray cinwaan ku yaal xaafadda Bar Beach ee magaalada Newcastle ka dib markii ay soo warrameen in solarada guryaha dusha sare ka qaata ay gubanayaan. Mar labaad, dabka ayaa la damiyay ka hor inta aan waxyeello dhisme oo weyn aysan dhicin. Sababta suurtagalka ah lama sheegin.
Dabka iyo Samatabbixinta NSW waxay sheegtay sanadkii la soo dhaafay dabka la xiriira qoraxda inuu kordhay shan laab shantii sano ee la soo dhaafay, laakiin ma bixin wax lambar ah. In ka badan 600,000 oo nidaam tamarta qorraxda ah ayaa laga rakibay New South Wales, meel kasta oo ay ku lug leeyihiin qalabka korantada ee ballaadhanna dhacdooyin baa ka dhici doona - laakiin tan waa in aan la aqbalin oo keliya haddii ay jirto meel lagu hagaajin karo.
FRNSW waxay horey u xustay furayaasha kala-goysyada inay kudhawaad ​​kalabar dababka nidaamka tamarta qoraxda ee gobolka. In kasta oo saamiga kuwa go'doominta saqafka kore ay yihiin dambiilaha lama sheegin, haddana waxay u badan tahay in badankood la siiyay diiwaanka raadraaca ee qalabkan dhibaatada leh.
Beddelka kala-goynta qalabka 'DC isolator biiro' waa beddelaad gacan ku shaqeeya oo lagu rakibay dhinac qorrax soorayaal ah oo awood u siinaya in DC-da hadda u dhexeysa qorraxda iyo qalabka wax lagu beddelo la xiro. Si la yaab leh, waxaa loogu talagalay inay noqoto farsamo nabadgelyo oo dheeri ah waana shuruud looga baahan yahay dhammaan nidaamyada tamarta qorraxda ee Australia. Laakiin waxaad moodaa inaan nahay dalka kaliya ee wali u baahan isticmaalkooda.
Qaar badan oo rakibayaasha qoraxda ayaa quudhsada inay rakibaan nalka dusha sare ee isolalka DC waxaana jira dhaqaaqyo looga baahan yahay in laga saaro shuruudaha Australia - taasna dhakhso uma imaan karto. Waxa kale oo jira riixid ah in laga takhaluso go'doomiyaasha darbiga ku dheggan; taas bedelkeed waxay u baahan tahay kal-sooc lagu dhex daro qalabka wax lagu dhejiyo qorraxda.
Kuwani waa dhowr horumar oo la samayn karo - mid kalena waa milkiileyaasha oo nidaamyadooda la hubinayo.
Beddelayaasha kala-goysyada DC ee tayada wanaagsan leh oo si habboon loo rakibay oo si hufan loogu ilaaliyo sharootku guud ahaan waa aamin. Shroud waa shuruud kale oo muddo jirtay oo kala-soocii ku xirnaa dhacdadii shalay uma muuqan mid leh. Waxaa laga yaabaa in rakibidu horay u sii caddeysay shuruudaha, laakiin dejintu guud ahaan waxay umuuqatay inay xoogaa yar tahay.
Nabdoonaanta dabka ayaa ah sabab kale oo muhiim ah oo loo doorto qalab rakibiya qoraxda. Laakiin iyada oo aan loo eegin tayada qalabka iyo qalabka rakibidda oo la siiyay duruufaha adag ee dusha sare ee furayaasha DC isolator iyo qaybaha kale ee nidaamka tamarta qorraxda waa inay ku adkaystaan ​​sannado badan, waxaa muhiim ah in la sameeyo baaritaan iyo nidaam tijaabo ah oo dhowrkii sanoba mar la sameeyo.
Michael wuxuu qabtay cillada korantada cadceeda ka dib markii uu soo iibsaday qaybo si uu u wada mideeyo nidaamka PV-ka yar ee ka baxsan shabakadda sanadkii 2008. Wuxuu tan iyo xilligaas ka warramayay wararka tamarta qorraxda ee Australia iyo tan caalamiga ah.
Si kastaba ha noqotee, taasi waa sababta ay u soo rogeen shuruudda nacasnimada ah ee ah in la saaro kuwa ka soocaya DC dusha sare, si ay dhibaatooyin u geystaan, maahan?
Waxay u egtahay in looga baahan yahay nidaamyada biyaha kulul inay soo baxaan oo ay faafiyaan legionella, iyadoo laga mamnuucayo biyaha kulul kululeeyayaasha biyaha.
Xaqiiqdii waligaa ma fahmin macquulnimada kala-goynta DC ee ah inuu saaran yahay darbiyada saqafka. Celcelis ahaan isticmaalehu ma kori doono jaranjaro si loo go'doomiyo looxyada sabab kasta ha noqotee. Kala-goysyadu waa inay ahaadaan heer dhulka ah oo si fudud loo gaadhi karo.
Waxaan hayaa 3 nidaam qoraxda. Midkii ugu horreeyay ayaa lagu rakibay 2011. Majiro wax kalleeyeyaal DC ah oo guddiga kujira laakiin waxaa jira qalabka wax lagu xiro oo ku xiga qalabka wax lagu beddelo.
Nidaamka seddexaad waxaa lagu rakibay 2018, wuxuu leeyahay kala-goysyada DC saqafyada saqafka iyo sidoo kale inuu ku xigo rogaalka (laba jibbaar kala-go'yaasha DC).
Sharoodku wuxuu qorraxda ka ilaaliyaa biiraha kala-gooyaha DC kaas oo ka caawiya inuu joojiyo inuu aad u kululaado wuxuuna sidoo kale ka hortagaa nabaad-guurka UV. Waxa kale oo ay ka ilaalisaa roobka ugu liita.
ADELS NL1 Series DC Isolator Switches ayaa lagu dabaqayaa 1-20KW nidaam degenaansho ama ganacsi sawir leh, oo la dhigayo inta udhaxeysa modululada sawir qaadista iyo rogayaasha. Waqtiga gelitaanka waa in ka yar 8ms, taasi waxay ilaalinaysaa nidaamka qoraxda mid amaan ah. Si loo hubiyo xasilloonideeda iyo nolosha muddada dheer, alaabtayada waxaa lagu sameeyaa qaybo leh tayo wanaagsan. Max danabku waa ilaa 1200VDC. Waxay haysaa hoggaan aamin ah oo ka mid ah alaabada la midka ah.